Iimpembelelo zeNtlalo | Martech Zone
Lwesine, Matshi 28, 2013 Douglas Karr
Ndicinga ukuba abathengisi abaninzi bajonge iimpembelelo kwezentlalo ngokungathi lolunye uhlobo lweziganeko ezintsha. Andikholelwa ukuba kunjalo. Kwiintsuku zokuqala zikamabonwakude, sasisebenzisa umdlali weendaba okanye umdlali weqonga ukubeka izinto kubaphulaphuli. Ezi nethiwekhi zintathu bezinabaphulaphuli kwaye bekukho ukuthembana kunye negunya elisekwe… ke ishishini lezentengiso lazalwa.
Ngelixa imithombo yeendaba kwezentlalo ibonelela ngeendlela-ezimbini zonxibelelwano, abachaphazeli kwimidiya yoluntu bahlala benempembelelo kwicala elinye. Banabaphulaphuli, nangona kuncinci kakhulu kwaye kuyinto encinci kumzi mveliso okanye isihloko esisesandleni. Kubathengisi, ingxaki iyafana nangona. Umthengisi unqwenela ukufikelela kwintengiso kunye nefuthe elinempembelelo kwaye ungumnini wentengiso. Ke njengokuba iinkampani zathenga abathengisi kwaye nabantu bazo bababeka, sinokwenza okufanayo nakubantu abashukumisayo.
Le infographic evela MBA kwiNtengiso Uthetha ngendlela umntu anokufumana kwaye asebenzise abachaphazeli eluntwini. Andiqinisekanga ukuba ndiyavumelana nekota Iimpembelelo zeMega ngaphakathi kwe-infographic, nangona kunjalo. Endaweni yoko, ndiza kubabiza abo iindaba zosasazo zasekuhlaleni. Kukho izihloko ezithile endizithembayo kwabasemagunyeni… kodwa ayizizo zonke. Ndizakumthemba uGary Vaynerchuk kwi wayini nasekuthengiseni, uScott ezimotweni, kunye noMari kuThengiso kuFacebook… kodwa andizukubathemba ukuba baza kwenza amalungiselelo esitokhwe sam!
tags: Ann Handleybrian solisUChris Brogangary vaynerchukGuy Kawasakikwi-infographiclizMari Smithirobob scobleScott montyuSeti uthixoiimpembelelo zentlalo
Ungasidibanisa njani isiCwangciso sakho soMxholo kunye neMikhankaso yeendaba zeNtlalo